Wararkii ugu dambeeyay qaraxyada ka dhacay maanta Kampala | Arrimaha Bulshada
Home News Wararkii ugu dambeeyay qaraxyada ka dhacay maanta Kampala
Wararkii ugu dambeeyay qaraxyada ka dhacay maanta Kampala
Bulsha:- Wararkii ugu dambeeyay ee labo qarax oo ka dhacday bartamaha magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegaya in ugu yaraan afar qof oo ay labo boolis yihiin ay ku dhinteen labadii qarax ee mataanaha ee gilgilay caasimadda Uganda eeKampal, sida ay ku warrantay warbaahinta gudaha.
Warbaahinta dowladda ee New Vision ayaa ku warrantay labo qof oo meyd ahaa lagu arkay goobtii uu qarax ka dhacay gaar ahaan meel u dhaw dhismaha baarlamaanka Uganda.
Labo sarkaal oo boolis ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar kale oo lala beegsaday saldhig boolis ah, sida ay ku warrantay warbaahinta gaarka loo leeyahay ee Urban Television.
Dhinaca kale, 27 qof oo ku dhaawacmay qaraxa ayaa lagu daweynayaa cisbitaalka weyn ee ku yaalla caasimadda Kampala.
Cabsi ayaa soo wajahday dadka ku nool magaalada Kampala kadib markii labo qarax oo is xig xiga ay ka dhaceen wadada baarlamaanka Kampala iyo saldhiga dhexe ee magaalada Kampala.
Waxaa la soo dhoobay hareeraha wadada isku xirta Kampala iyo Jinja ciidamo badan. Iyada oo si aad ah loo sugayo ammaanka, waxaana gaadiidka laga hor istaagay Aqalka Kitgum House.
Shacabka ayaa lagu amray inay ka baxaan Mabirizi Plaza, oo ku dhow Saldhigga Dhexe, halkaasoo mid ka mid ah qaraxyada uu ka dhacay. Waddada Burton iyo Waddada Johnson ayaa sidoo kale laga saaray isu socodka dadka.
Mid ka mid ah qarax ayaa ka dhacay bannaanka hore ee Saldhiga Dhexe, halka midka kalena uu ka dhacay Wadada Baarlamaanka.